Ingeniso elahlwayo eyinkunzi inyuke ngepesenti ye-12
Ingeniso elahliweyo ye-China ngokwenkunzi yayimi kwi-17,642 yuan kwisiqingatha sokuqala sonyaka, inyuke nge-12.6 yeepesenti kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo ngokwegama eliqhelekileyo, idatha esemthethweni ibonakalisile. Emva kokuncitshiswa kwezinto zamaxabiso, kwingeniso eyilahlekileyo eyinkunzi inyuke ngepesenti ye-12 ngonyaka. Izinga lokukhula eliphezulu ...
Ubuso "bokuhleka kakhulu" busemthethweni yi-emoji ethandwa kakhulu kwihlabathi
Ubuso "bokuhleka kakhulu" busemthethweni njengeyona emoji ithandwayo emhlabeni, ngokutsho kwabaphandi abavela eAdobe (ADBE) abaphonononge abasebenzisi abangama-7,000 eMelika, eUnited Kingdom, eJamani, eFrance, eJapan, e-Australia, naseMzantsi Korea. I-"thumbs up "ye-emoji ingene ...
Imoto yombane yaseTshayina iqhekeza kwintengiso yaseBelgium
Ukuza kuthi ga ngoku, iAiways ithumele ngaphandle kwezithuthi eziliwaka kwi-European Union nakuMbindi Mpuma. Imodeli ye-U5 sele ithengiswa eFrance, eJamani, eNetherlands, kwa-Israyeli nase-Belgian, kwaye kungekudala izakwaziswa eSwitzerland, eDenmark naseNorway. I-BRUSSELS, nge-13 kaJulayi (i-Xinhua) -Impendulo ...
Ukubhiyozelwa kweshumi leminyaka lokusungulwa kweQela lamaKomanisi lase China kwabanjelwa eTiananmen Square
Uhambo lweminyaka elikhulu luye lwaba luhle kakhulu, kwaye intliziyo iya kukhula yomelele ekuqaleni kwenkulungwane. Ngentsasa kaJulayi 1, ukubhiyozelwa kwesikhumbuzo seminyaka eli-100 sokusekwa kweQela lamaKomanisi lase China kwabanjelwa eTiananmen Square eBeijing. Ngaphezulu kwama-70,000 abamele ...
Yaziswa! La mazwe ali-15 aza kukhupha imali emanyeneyo!
Ngexesha le-19 lendawo, uQoqosho loLuntu lwaMazwe aseNtshona Afrika, ekwabizwa ngokuba yiECOWAS, yabamba ingqungquthela eAccra, ikomkhulu laseGhana. Usihlalo weKhomishini ye-ECOWAS, uCassie Bru, ubhengeze entlanganisweni ukuba iintloko zawo onke amazwe angamalungu ziyamkele “imali enye ...
Isishwankathelo seendaba ngeveki
1 Amazwe akumazantsi mpuma eAsia ayaqhubeka nokuba mandundu lo bhubhane, uqinisekisile ukuba phezulu phezulu Kwiveki ephelileyo, ubhubhane eMzantsi-mpuma Asia uqhubekile nokuba mandundu. IVietnam yarekhoda amatyala amatsha angama-515 ngosuku olunye, yaphula irekhodi lelizwe lamatyala aqinisekisiweyo ngosuku olunye. I-Indonesia irekhode i ...
Ukuthetha ngemeko yokuthumela kwelinye ilizwe kwishishini lezinto zokwakha kulo nyaka
Kwi-2021, loluphi uhlobo lweemeko eliya kujongana nomzi mveliso wezinto zokwakha? Yeyiphi imiba ekufuneka inkampani yenkampani yorhwebo lwangaphandle igxile kuyo? Ukuphendula kule micimbi ingasentla, Unako, usekela sihlalo woMbutho wase China waMashishini amaNcinci naPhakathi kunye noMlawuli weNkcubeko yeHlabathi.
Malunga neRMB! Ibhanki esembindini yase China ephethe amajelo eendaba: lumka umngcipheko wokubuyela kwidola laseMelika kwisiqingatha sesibini sonyaka
Kungekudala, ixabiso le-renminbi liye laguquka kakhulu, kwaye amagosa asebhanki aphakathi athethile kaninzi malunga noku. Ngesi sihlandlo, indawo yemithombo yeendaba yasebhankini yase-China ichaze kwinqaku lakutshanje ukuba kufuneka bawuphaphele umngcipheko wokuphinda ubuye kwi-dollar yase-US. Oku kulandelayo ngu ...
Emva kokunyuka okubukhali kunye nokuwa ngoJuni, imarike yentsimbi ithambekele kweliphi icala
Kwimarike Namhlanje, ixabiso lesinyithi lehla lancipha, kubandakanya nexabiso le-rebar lase-Shanghai lancitshiswa nge-100 yuan / ngetoni, ixabiso le-rebar le-Hangzhou lancitshiswa nge-100 yuan / ngetoni, ixabiso le-Wuhan rebar lancitshiswa nge-80 yuan / ngetoni, umndilili wesizwe Ixabiso le-rebar kwizixeko ezingama-27 yayiyi-5125 yuan / itoni, 3 ...
Ixabiso eliphakathi le-RMB xa kuthelekiswa nedola yaseMelika ezantsi yeepawoti ezingama-261 ngoJuni 4
IBhanki yaBantu yase China igunyazise iZiko lase China lokuTshintshiselwa kwaNgaphandle ukuba libhengeze ukuba inqanaba eliphakathi le RMB yotshintshiselwano kwimarike yotshintshiselwano lwangaphandle ngoJuni 4, 2021 yile: 1 USD ukuya kwiRMB 6.4072, 1 EUR ukuya kwiRMB 7.7713, 100 JPY ukuya RMB 5.8099, 1 HKD ukuya RMB 0.82585, 1 GBP ...
Ibhodi yeGypsum uncamathisele nge-fiberglass meshsteps
Amandla ebhodi ye-gypsum anokunyuswa ngokuncamathisela amalaphu kwibhodi ye-gypsum. Kuyimfuneko ukuba baqonde izakhono ezithile kunye neendlela zokwenza i-mesh yelaphu yokuncamathelisa. 1. Vula ikhava yebhakethi yesibopheleli uze uxhokonxe isibopheleli esishushu kwakhona ngesixhobo esikhethekileyo sokuhambisa okanye isixhobo se sh ...
Iglu yokuchama kunye nelatex umahluko phakathi
I-fiberglass mesh kufuneka incanyathiselwe ngaphambi kokuba ibe yimveliso egqityiweyo. Kukho iintlobo ezi-2 zokuncamathelisa: iglu yokuchama kunye nelatex. Umahluko phakathi kweentlobo ezi-2 zokuncamatheliswa ngoku wazisiwe: 1: xa umaleko wokhuseleko okhuselayo uqala ukuthwala uxinzelelo, ilaphu le-mesh kufuneka libenakho ...